I-SlayerAI: Ukumisela amagama amaninzi ahlukeneyo ekufuneka uphumelele | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 18, 2022 NgoLwesibini, Januwari 18, 2022 Douglas Karr
Ngokomyinge, ezintlanu amaxesha njengoko abantu abaninzi ukufunda isihloko njengoko funda ikopi yomzimba. Xa ubhale isihloko sakho, uchithe amashumi asibhozo eesenti kwidola yakho.
UDavid Ogilvy, Ogilvy kwiNtengiso
Umbulali bukrelekrele bokwenziwa (AI) imveliso eqikelela ukuba isihloko sibandakanya njani na kubaphulaphuli abanikiweyo. Umzekelo, uyayiqonda loo denim Izidwangube ezinesidima are I-15% ithatha inxaxheba ngakumbi kunedenim iibhulukhwe ezimfutshane kwimarike yefashoni. I-Slayer iqhuba isicatshulwa ngokusekwe apho ikopi iya kuvela khona, ikunika iziphumo ezilungiselelweyo zokwandisa impumelelo yabaphulaphuli bakho. I-AI isebenza ngokuhlalutya amawaka amaphulo angaphambili kunye neetekisi, kunye nokusebenza kwazo. Uqeqeshelwa ukuqaphela ukuba isicatshulwa siyabandakanya okanye hayi.
Omnye umzekelo wendlela uSlayer asetyenziswa ngayo ukonyusa umthengi kuchukumisa 30% kwinkampani yokhuseleko lwe-cyber erhweba esidlangalaleni, OneSpan. I-OneSpan isebenzise i-Slayer ukwandisa imigca yesihloko se-imeyile ngokuchonga eyona mvume ibandakanyekayo:
Kutheni i-SlayerAI ibalulekile?
Kwiminyaka emi-3 edlulileyo isixa sekopi eyenziweyo siye safumana inyuke ngo-10x ngaphezulu.
Ubungakanani beMarike yokuDalwa kweDijithali yeGlobal kulindeleke ukuba bufikelele kwi-38.2 yeebhiliyoni zeedola ngo-2030 kwi-CAGR ye-12% ngexesha lika-2020 kunye no-2030. ngexesha loqikelelo.
InsightSLICE, Imakethi yokuDalwa kweMxholo weDijithali
Oku kukhula kuqhutywa zizinto ezininzi - ukunyuka kwenguqu kurhwebo lwe-intanethi, ukwanda kwabasebenzisi abatsha abaza kwi-intanethi okokuqala, kunye nokukwazi ukwenza ikopi nge-AI.
Kukho italente kunye nezixhobo ezininzi kunangaphambili ukwenza umxholo, kwaye ukutshintshela kurhwebo lwe-intanethi kunyusa imfuno yekopi… kwaye iya isiba nkulu.
I-SlayerAI ikunika amandla okunxibelelana nabaphulaphuli bakho kulwandle lomxholo owenziwe ngexabiso eliphantsi. Ngale nto, unxibelelwano olukhulu luba namandla amakhulu. Ukuma ngekopi yakho, kuthatha okungaphezulu kokuqinisekisa ukuba unegrama efanelekileyo kunye nopelo, okanye ukulandela nje iindlela ezilungileyo zokuthengisa, kuba isiphelo simalunga nokukwazi ukudibana nabaphulaphuli bakho kwi-niche yabo.
Okwangoku, ingxaki yonxibelelwano olulambathayo isonjululwa ngongenelelo lwezandla (umzekelo, umhleli ongumntu) kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ezithile zesoftware eziya kukunika imigaqo eqhelekileyo (i-Grammarly yeyona idumileyo). Ngelixa abahleli abangabantu banokuba bakhulu kwaye bechaneke ngokuthe ngqo, ukufumana umkopishi okhethekileyo kunokubiza kwaye kukho umsebenzi omninzi abanokuwenza.
I-SlayerAI ngoyena mncedisi ufanelekileyo, ngakumbi xa injongo ikukuba amaphulo akho okuthengisa enze kakuhle, ngokungaguqukiyo.
Ngubani uSlayerAI olungele yena?
I-SlayerAI sisixhobo esihle kuye nabani na obhala ikopi kwi-intanethi. Okwangoku, abasebenzisi beSlayer babandakanya amashishini amakhulu, amashishini amancinci, iiarhente zentengiso, kunye nabakhupheli abazimeleyo.
I-AI ikhululekile ukusebenzisa ixesha elilinganiselweyo, kwaye inokunceda ngokukhawuleza ukuphucula umxholo, ukongeza koku:
Ukwenza iiveki zovavanyo lwe-A / B ngemizuzu endaweni yeenyanga
Khangela upelo lwefuthe, endaweni yegrama
Ukulawula umgangatho ngoko nangoko kubakhupheli abancinci
Isitshixo sokubhala ikopi elungileyo kukuqinisekisa ukuba abaphulaphuli bakho bafuna ntoni kuqala, kwaye ke ubandakanye ibhrendi yakho. Yiyo loo nto uSlayer edale amandla okukhetha kuninzi lwabaphulaphuli ekujoliswe kubo; ukusuka kubantu abanomdla kwi-crypto, kwabo banomdla kwifashoni, ubuhle, ukuqina, iimoto, ukulungiswa kwekhaya kunye nokunye.
I-AI yethu ivavanywe kakhulu kunye neqela elincinci labasebenzisi be-beta, kwaye iziphumo ziye zaba yinto engaqhelekanga. Nokuba ibinceda ekuqaleni ukwandisa amazinga avulelekileyo ukusuka kwi-12% ukuya kwi-19%, okanye ukunceda i-arhente yokuthengisa ikhule ngokuvumela ukuba bachithe ixesha elincinane bejonga umsebenzi wabo.
Ngaba ufuna ukubhala izihloko ezingcono zewebhusayithi, imigca yezifundo, izihloko zeblogi, ikopi yentengiso, izithuba zentlalo kunye neSMS? I-Slayer ikugqumile kuyo yonke imida.
Isebenza njani iSlayerAI?
Ukusebenzisa i-Slayer kulula, bhalisela iakhawunti yasimahla, ungene, emva koko:
Khetha abantu ojolise kubo
Faka ikopi ongathanda ukuyizuza, kwaye ukhethe ukuba uyafuna na iingcebiso
Yiyo leyo! Ukuba awubaboni abaphulaphuli bakho abafanelekileyo, unokucela entsha kuthi usebenzisa ukwehla kwicala lasekhohlo lewebhusayithi.
Amanqaku owubonayo lithuba lepesenti lesicatshulwa sakho esibandakanya kakhulu. I-AI ichanekile ngama-80%+, okuthetha ukuba iintloko zakho ngoku ziya kutsala amehlo abafundi bakho abaxabisekileyo rhoqo.
Kwenzeka ntoni xa ungenwe yintsholongwane?
Ukunika imveliso okanye inkonzo yakho elona thuba lilungileyo lokungena kwintsholongwane kunokutshintsha kakhulu ubutyebi benkampani yakho. Ngumahluko phakathi konyaka wokuthengisa irekhodi kunye nokugcina imeko ikhoyo.
Elona thuba lakho lokukhula kunye nokuhamba ngentsholongwane kukusebenzisa i-SlayerAI ukuqinisekisa ukuba wenza eyona migudu yakho yokuthengisa. Bhalisa ngoku kwaye ufumane iiveki ezi-2 ze-SlayerAI simahla!
Bhalisela uvavanyo lwe-SlayerAI
Ukubhengeza: Ndisebenzisa amakhonkco am adibeneyo eAmazon kunye SlayerAI kweli nqaku.
tags: ikopi yentengisoaiizinga lokucofaUkuThengiswa kweMpahlaulungiselelo lomxholoctrimeyile evulekileyo amaxabisousetyenziso lomgca wesihloko se-imeyileukulungiselelwa kwesihlokozihlokoukwandisa i-ad ctrnyusa izinga lokucofaukwandisa iireyithi zokuvula i-imeyilekonyusa amaxabiso avulekileyoukwandisa izihloko zeendabaumbulaliukulungiselelwa komgca wesihloko
Indlela yokudibanisa iiPosti kunye neentlobo zePosti yeSiko kwiMibuzo ye-WordPress kunye ne-RSS Feed